कनकाई वनमा देश विदेशका लाखौ पर्यटक भित्राउने वातावरण बनाउँछु । -
बढी बच्चा जन्माउन प्रोत्साहन गर्ने नगरको निर्णयप्रति आक्रोशः ‘के महिला मेसिन हुन
पत्रिकाका उपहार कार्यक्रम पाठकलाई लोभ्याउने कि झुक्याउने ?
शौच गर्न चियाका पोथ्राबीच लुक्नुपर्ने बाध्यता छ बगान मजदूरलाई
सुरुङ्गामा झापाली जननिर्वाचित नेताको भव्य स्वागत, गल्ती गर्ने प्रतिनिधिको पोल लगाउन ओलीको आग्रह
झापामा तात्दै बाम राप्रपाका उम्मेद्धार
सताक्षी गोल्डकपमा रुपन्देहि विजयी
शर्माको भोट माग्ने उम्मेद्धारको काइदा धान काट्दैँ भोट माग्दै
चर्च व्वाइज र एफिएफ दुधे गोल्ड कपको फाइनलमा
विएण्डसी अस्पताल विर्तामोडमा तीन वर्षमा लिए दश लाखले सेवा
Home / Main News / कनकाई वनमा देश विदेशका लाखौ पर्यटक भित्राउने वातावरण बनाउँछु ।
कनकाई वनमा देश विदेशका लाखौ पर्यटक भित्राउने वातावरण बनाउँछु ।
Lila Jhapali September 7, 2018	Main News, अन्तरवार्ता, आर्थिक, फिचर, विचार, शिक्षा, समाचार, समाज Comments Off on कनकाई वनमा देश विदेशका लाखौ पर्यटक भित्राउने वातावरण बनाउँछु । 252 Views
अध्यक्ष ख्याम ओली कनकाई सामुदायिक वन सुरुङ्गा ।
ख्याम ओली (४६) कनकाई सामुदायिक वन समुहका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । वन हस्तानतरणका हिसावले तराइकै पहिलो यस सामुदायिक वनमा रहेको बाघे सिसौँ नेपालमै मुल्यावान काठमा पर्दछ । देशकै पवित्र कनकाई माइको किनारमा रहेको यस वनलाई जडिबुटी संग्रालय र आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटकका लागि समेत आकर्षकणको केन्द्र बनाउने सोचमा हुनहुन्छ अध्यक्ष ओली र सिङ्गो वन समिति । भर्खरै पाथिभरा विकास समितिका सदभावना दुत समेत हुनुभएका ओली हाल कनकाई उद्योग बाणिज्य संघका सचिव समेत हुनुहुन्छ । उहाँद्धारा संचालित होटल डिलाइट पर्यटनका हिसावले उच्च कोटीको मानिन्छ । जसमा नेपालका प्रधानमन्त्री लगायात उच्च पदस्थ कर्मचारी स्वदेशी विदेशी पर्यटकहरु यस होटलमा बसि सक्नुभएको छ । लामो समय नेपाली सेना तथा विदेशी भुमिमा समेत युद्ध लड्नुभएका ओली अब बाकी जिवन भने आफ्नो जन्मभुमि सुरुङ्गाकै बृद्धिविकासमा लगाउने बताउनु हुन्छ । आफ्नो कार्यकालकै पहिलो बर्षमा जिल्लामै प्रथम कनकाई सामुदायिक वनलाई वनाउन सफल हुनुभएका ओली सग गरिएको कुराकानी ।
१) तराइकै पहिलो सामुदायिक वन हालसालै जिल्लामै प्रथम पनि हुनुभयो यस वनमा त्यस्तो के छ यसका वारेमा वताइदिनुहोस न ?
यो सामुदायिक वन तराइकै पहिलो हस्तानन्तरिक वन हो । तत्कालिन वनमन्त्री विरमणि ढकालले २०४९ सालमा वन उपभोक्तालाई हस्तानतरण गर्नुभएको हो । जसबेला यस वनको संस्थापक अध्यक्ष केदार गिरी रहनुभएको थियो । यो देशकै पुरानो वन हो , जहाँ लोप भइसकेका प्रजातिका सिसौ जातको काठ पाइन्छ जुन नेपालमै कमैमात्र ठाउँमा पाइन्छ । जुन वन कनकाई माइको तटमा रहेको छ भने चुरे भावर क्षेत्रसग नजिक्कै जोडिएको पाइन्छ । भने धार्मिक स्थलसग पनि गासिएको छ । जहाँ पवित्र धार्मिस्थल कोटिहोम , धनुषकोटीधाम , कनकाई नदि , धेरै मन्दिरहरुले घेरिएको छ । यो करिवन २६७.६ हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको यस सामुदायिक वनमा बाधे सिसौको साथमा खयर , विभिन्न जडीबुटी , देशमै कहिल्यै बन्द नहुने यस कनकाई नगरको सुरुङ्गाको मुटुमा रहेको यस सामुदायिक वन सौन्दर्यको हिसाबले वातावरणीय हिसावले महत्वपुर्ण वन हो । जुन वनलाई हामीले पर्यापर्यटनका हिसावले अगाडि लैजादै छौ । वनबाट आनन्द मात्रै होइन सिक्ने थलोका रुपमा समेत यसलाई लैजाने सोचमा छौ ।
हामीले यसलाई बृक्षारोपण गर्ने र हरियाली बनाउने र यसलाई सर्पोट गनैका लागि पार्कहरु निर्माण गर्ने , यस क्षेत्रमा साइन्स सिटी पार्कको निर्माण गर्ने तयारी हामीले थालेका छौ । हामीले यहाँमात्रै नभएर देश विदेशबाट समेत आउने विद्यार्थी भाइबहिनीहरुका लागि एउटा राम्रो ज्ञानवद्धन साइन्स सिटी पार्कको अवधारणा बनाएका छौ । यहाँ हामीले नेपालका सम्पुर्ण १२६ प्रकारका जनजातिहरुको पुर्खाहरुको पहिचान झल्कने शालिक बनाएर यसलाई जंगल सफारीका रुपमा यस वनलाई विकसित गरेर लैजाने योजना हामीले बनाएका छौ ।
यसका लागि नेपाल अधिराज्यभरीका पर्यटकहरुलाई यस क्षेत्रमा ल्याउने हाम्रो योजना छ । साथै देशबाहिरका पर्यटकहरुले समेत हाम्रो यस क्षेत्र हेरर मनोरन्जन र ज्ञान प्राप्त गर्ने छन । त्यो वातावरणको श्रृजना हामी गर्ने छौ । हामी जतिपनि जनजातिहरु छौ त्यी सबै जनजातिहरुको साझा हवका रुपमा हामी यस कनकाई सामुदायिक वनलाई विकसित गर्ने छौ । जनजातिहरुको पुखौली थलो , जंगल सफारी र केहि स्थानलाई हामीले खुल्ला चिडियाखानाका रुपमा समेत यस वनलाई विकसित गर्दै लैजाने छौ । जंगलको सबैतिर अग्निपथमा आकर्षक डिजाइन समेत गरेर हिड्नमिल्न् स्थान हामी बनाउदै छौ । बच्चाहरुका लागि त्यी ठाउँहरु बनाइने छ ।
२) जंगल सफारीको कुरा गर्नुभयो यसका लागि के कस्तो कार्यक्रम अगाडि बढाउनुभएको छ ?
यसको लागि मेरो नेतृत्वको टिम बनमा निर्वाचित भएको ठिक एक बर्ष पुगेको छ । हामीले निर्वाचनका बेला हाम्रा केही फरक एजेण्डाहरु थिए । घोषणा पत्रमा हामीले उल्लेख गरेका थियौ । घोषणापत्रमा लेखिएका धेरैवटा कामहरु हामीले एकवर्षभित्रमा पुरा पनि गरेका छौ । वाकी रहेका थप योजनाहरुको काम हाम्रो असोजदेखि सुरु हुन्छ । यसको डिपिआर बनाउन गइरहेका छौ कस्तो किसिमको पार्क बनाउने , सफारीका वारेमा हामीले योजना बनाइसकेका छौ अव यसलाई डिपिआर सहितको काम असोजमा सुरु गरिने छ ।
३) सुरुङ्गाको बाधे सिसौ जुन देशमै लोभ हुन लागेको छ , भावी पुस्ताका लागि पनि हस्तानतरणका लागि खास योजना के बनाउनु भएको छ ?
यसका लागि वन क्षेत्र घेराबारा , वृक्षरोपण , र चोरी निकासी नियन्त्रणलाई कडाइका साथ लागु गरेका छौ । बनको प्रमुख सत्रुका रुपमा रहेको डडेलो नियन्त्रणलाई यस बर्ष हामीले सुन्यमा झार्न सफ लबनेका छौ । चोरी रोक्न वनमा सिसि क्यामेरा जडान र वनमा सोलार बत्ती हाल्ने काम गरिसकेका छौ यो क्रम जारी छ । अर्को महत्वपुर्ण कुरा हामीले सिसौ मर्नका कारण पत्ता लगाउन माटो परिक्षण गर्ने , सोहि अनुसारको औषधी उपचार र विरुवा रोप्ने सिचाइका लागि कनकाई माईबाट पुर्व तर्फ पाइपबाट पानी ल्याएर यस वन क्षेत्रलाई सिचाइ गर्ने हाम्रो काम हुनेछ यी सब काम मेरो कार्यकालमै सुरु र लागु गरेर लैजाने छ ु । सिसौ प्रजातिलाई यस जंगलमा माटो अनुकुल नभएको खण्डमा अरुनै विरुवा रोप्ने योजना छ । दक्षिणी क्षेत्र ब्लक नम्बर १ र २ मा हामीले जडिबुटी रोप्ने काम गरेका छौ । यसलाई धार्मिक बृक्ष र जडिबुटीको संग्राहलयका रुपमा यस क्षेत्रलाई विकसित गर्दै लैजाने लक्ष्य हामीले बनाएका छौ , जसका लागि काम समेत सुरु भइसकेको छ ।
४) तपाइको कार्यकाल १ बर्ष बित्यो यस १ बर्षे कार्यकाललाई कसरी मुल्याङ्गन गर्नुहुन्छ ?
त्यसवेला ठिक एक वर्ष पहिले भदौ १० गते निर्वाचन भएको थियो यस वनको सबै राजनैतिक दलका साथीहरुले हामीलाई हाम्रो टिमलाई साथ दिनुभएको थियो । यो सबैको साथ सहयोगमै बनेको समिति भएकाले पनि सबैको साथ र सहयोग पनि पाइनै रहेको छ । यस अर्थमा म पनि एक भाग्यमानी अध्यक्ष मान्छु । मैले सफत ग्रहण गर्दै गर्दा सम्पुण पार्टी प्रतिनिधि र उपभोक्तामाझ प्रतिवद्धता जाहेर गरेको थिए । सबै प्रतिनिधिहरुको प्रतिक्रिया र सुझावलाई साझा धारणा बनाएर एउटा प्रतिवद्धता जनाएको थिए । त्यसवेला मैले जेजे कुराहरु बोलेको थिए अधिकांसलाई मैले पुरा पनि गरेको छु । यसकारण यो सफलताको पछाडि सम्पुर्ण उपाध्यक्ष ललितबहादुर कार्की , सचिव मान्ता खरेल , सहसचिव श्रीप्रसाद खरेल , कोषाध्यक्ष प्रकाश थापा लगायात सिङ्गो कार्यसमिति र सदस्य उपभोक्ता सबैको साझा पहलकदमी रहेको छ । म आउनु पहिला कार्यालयको जुन सिस्टम थियो त्यसलाई हटाएर सबै आधुनिक र कम्युटर प्रविधिमा लगेको छु । काठ वितरण प्रणालीमा समेत कम्युटर प्रणालीमा लगेर न्यायचित वितरण गर्ने गरेको छु ।यी सबै कामहरुलाई अनलाईन सिस्टममा लगिएको छ । अर्को कुरा उपभोक्ताकै माध्यमबाट पुरानो शैलीबाट जंगलको झाँडी फडानी गर्ने प्रचलन थियो ।
यसले गर्दा महिनामा २ पटक सबै उपभोक्ताहरुले दुःख पाउदै आएका थिए , यस पुरानो तरिकालाई हटाएर हाम्रो टिमले नयाँ मेशिन किनेर कर्मचारीबाटै जंगलको झाँडी फडानीको काम गर्दै आएका छौ , जुन सम्पुण हज्जारौ उपभोक्ताको पक्षमा कार्य रहेको छ । हामी अहिले उपभोक्तालाई झाडी फाड्न बोलाउदैनौ बरु बृक्षारोपणका बेला बोलाउछौ । आगलागि हुने खतरा अवस्थामा मात्रै हामी उपभाक्तालाई बोलाउछौ । यस क्षेत्रमा काठ चोरी , जंगल अतिक्रमण र चरिचरण ठुलो समस्याका रुपमा रहेको थियो हामीले अतिक्रमका घर टहराहरु हटाएका छौ । सुगुरका खोरहरु , परालका माचहरु , ढुङ्गाहरु ह्टाएका छौ । चोरी तस्करी नियन्त्रणमा आएको छ भने चरिचरण बन्द भएको छ । छाडा चौपाया बनमा छाड्नेलाई हामीले पक्रिएर जरिमाना तिराएका छौ । केहि ठाउँमा सुकुम्बासी रहेकाले समस्या छ त्यस ठाउँलाई पनि नगरपालिकासग समन्वय गरेर अन्यत्र सार्ने योजना छ । हाम्रो तथा छिमेकी जिल्लाबाट काठहरु चोरी गरिएर यस वन समुहको बाटो हुदै अन्यत्र लैजाने गरिन्छ । यसलाई रोक्न सडक वत्ती बाल्ने देखि लिएर उपभोत्ता , वन हेरालुको समेत सहयोगमा यसलाई नियन्त्रणका लागि सफ लबनेका छौ । चोरी तस्करीको कार्यलाई हामीले निरुत्साहित बनाएका छौ । वन भित्रबाटै ढुङ्गा बालुवा निकाल्ने काम हुने गरेको थियो त्यसलाई पनि हामीले पुर्णतय बन्द गरेका छौ । वन क्षेत्र र गाउविचमा पर्ने जंगलमा उपभोक्तालाई मद्धत गर्न तथा वन चोरी तस्करी नियन्त्रणका लागि नगरपालिकासग मिलेर वन क्षेत्रका विभिन्न ३ वटा बाटामा २५ बटा सोलार बत्ती हालेका छौ जसले झण्डै १२ सय उपभोत्तालाई फाइदा पुगेको छ ।
५) सामुदायिक वनको अर्को काम भनेको वन संरक्षण सगै गरीबी न्युनिकरण पनि हो यसका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसका लागि हामीले गरिब परिवारको पहिचान गरि उनीहरुको जीवनस्तर उकास्न बाख्राका पाठा वितरण गर्ने देखि लिएर वन समुहकै सक्रियतामा कनकाई सुरुङ्गा वचत तथा ऋण सहकारी संस्था हामीले खोलेका छौ । त्यसबाट समेत केहि व्यावसाय गर्न चाहने उपभोक्तालाई विना धितो कम व्याजदरमा ऋण लगानी गरेका छौ । यसमा हरेक वर्ष ५ लाख रुपैँया हामीले यस फण्डमा वनबाट जम्मा गरिदिन्छौ
।गरिब विरामी परिवारलाई समेत बेला मौकामा सकेको सहयोग गरिनै रहेका छौ ।
६) पर्याटकिय क्षेत्रको रुपमा विकसित गर्नका लागि वन र अन्य निकाय स्थानीय सरकारविच कस्तो सम्झौता भएको छ ?
विशेष गरेर कनकाई नगरपालिका र वन समुहविच यस वनलाई साइन्स सिटीका रुपमा विकसित गरेर लैजाने सहमति बनेको छ । यसका लागि कामहरु भइरहेको छ । कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख , उपप्रमुख लगायाततका पदाधिकारीहरुको समेत हाम्रो कनकाई नगरपालिकामा भएका सबै सामुदायिक वनहरुलाई एकिकृत विकास गर्दै पर्यापर्यटकिय क्षेत्रमा जोडने योजना पनि रहेको छ ।
७) जिल्लामै प्रथम पनि हुनुभयो यसबर्ष बधाई छ , अव बाकी २ बर्षको कार्यकाल सकेर जार्दै गर्दा कनकाई सामुदायिक वन लाई कुन रुपमा छाडेर जाने योजना बनाउनुभएको छ ?
म यस बन समुहमा आउदा निस्वार्थ भावनाले आएको हो । मैले आफुले पाउने सेवा सुविधापनि गरिबका छोराछोरीको शिक्षामा खर्च गर्ने घोषणा गरेको छु । मैले आजसम्म गरिआएका कामहरुलाई पनि उपभोक्ताहरुले हेरिरहनुभएको छ । यस वनलाई कनकाई नगरपालिकामात्रैको नभएर देशकै नमुना सामुदायिक वनका रुपमा विकसित गरेर लैजाने योजना छ , यसका कामहरु सुरु भइसकेका पनि छ । मैले जे सपना देखेर हिडेको छु , हाम्रो समितिले पनि यहि सपना देखेको छ । कम्तीमा नेपालभरकै पर्यटकहरुलाई यहाँ भित्राउन सकियोस , वन व्यावस्थापनका लागि सिक्न चाहनेहरुका लागि गतिलो पाठशाला बन्न सकोस यस सामुदायिक वन भन्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । आर्य आर्जनका लागि काठ दाउराको मात्रै भर पर्नु नपरोस यसका लागि बैल्कपिक आय आर्जनका बाटाहरु समात्न सकियोस भनेर हामीले योजना बनाएका छौ । मैले प्रण पनि लिएको छु यस सामुदायिक वनलाई उज्यालो सामुदायिक वनका रुपमा विकसित गर्न चाहन्छु भनेर । अवको केहि दिनमा हामीले ४ लाख लगानी गरेका छौ नगरपालिकाले १७ लाख रुपैँया लगानी गरेको छ ।
सुरुङ्गा देखि धनुषकोटीसम्मको बाटोमा सड्कबत्ती हाल्दै छौ । यो समेत गरि हामीले वन समुहमा ६८ बटा सोलार बत्ती हाल्दै छौ ।बत्ती हाल्ने कामलाई हरेक वर्ष निरन्तरता दिदै यस वन समुहलाई उज्यालो क्षेत्र बनाएर छाड्ने छु । रातीको समयमा पनि वनमा हिड्डुल गर्न सहज वातावरण बनाउछु । जेसिज र कनकाई नगरपालिकासग मिलेर सडकमा हरियाली बनाउने काम हामीले गरेका छौ यसलाई निरन्तरता दिने छौ । हाम्रो वन बाटो उत्तर र दक्षिणतर्फ गरेर २ भागमा विभाजित छ जसलाई उत्तरतर्फ साइन्स सिटी र दक्षिणतर्फ जडिबुटी खेतीका लागि प्रयोग गरेर आयआर्जन गर्ने छु । धार्मिक वन , चिल्डेन पार्क र जेष्ठ चौतारो बनाउने लक्ष्य रहेको छ , त्यसलाई पुरा गर्ने छु । यस वनलाई मैले छाडेर जादै गर्दा कम्तीमा आहाँ कति रमाइलो बनभ नेर फेरिपनि पर्यटकहरु यस वनमा घुम्न आउन बाध्य बनाउने छु । जुन धार्मिक , मनोरन्जनात्मक , तथा दुर्लभ बृक्ष तथा जडिबुटीको संग्राहलयका रुपमा विकसित गर्ने छु ।
मैले नेतृत्व छाड्दै गर्दा ख्याम ओलीको नेतृत्वले साह्रै राम्रो काम गर्यो भन्ने कुरा सबैको मुखबाट सुन्ने बातावरणको श्रृजन ागर्ने छु । यो मेरो वाचा भयो । सुकेका रुख निकाल्ने र नयाँ रुख रोप्नका लागि प्रदेश सरकार तथा जिल्ला वन कार्यालयमा फाइल अगाडि बढिसकेको छ अव कम्तीमा यस वन समुहमा रहेको सुकेका रुखको समस्या मेरै पालामा हल गर्ने छु । उपभोक्ता काठ नपाउने अनि वनको रुख जंगलमै सड्ने परम्पराको म अन्त्य गर्छु । यस कामका लागि जिल्ला वनका प्रमुख बोधराज सुवेदी , कनकाई नगरपालिकाका प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेल , प्रदेशसभा सांसद हिराकुमार थापा , संघिय सांसद एलपि साँबा लिम्बु लगायातको सक्रिय साथ र सहयोग रहेको छ । यसका लागि वनका सचिवलाई वन भिजिट पनि गराइसकिएको छ हामीसग वनमा १८ सय वटा सुकेको रुखहरु रहेका छन यसको व्यावस्थापन अव चाडै हुने छ । यस सुकेका रुखलाई हामीले आफ्नै उपभोक्तामा बिक्रि गरेर त्यसबाट आएको आम्दामीले वन क्षेत्रलाई तारजालीले घेरावारा गर्ने छौ । यसलाई पर्यापर्यटनको विकासमा लगाउछौ ।
८) अन्त्यमा भन्नुपर्ने केहि छ कि ?
अन्त्यमा हामी यो जुन अवस्थामा आएका छौ , यसमा सबैको साथ सहयोग रहिआएको छ , हामी वनको छेउ ट्राफिक बाट , कनकाई माइसम्मको क्षेत्रमा मलामीहरुको पिडालाई हेरेर मलामी मार्गको पनि निर्माण गरिरहेका छौ ।
यसमा आदरणीय समाजसेवी तथा व्यावसायी शेरबहादुर थापासग मिलेर कनकाई नगरपालिका र कनकाई सामुदायिक वनको लगानीमा करिव ३ किलोमिटर क्षेत्रलाई मलामी मार्ग बनाइरहेका छौ । र म र यस सामुदायिक वनलाई सहयोग सल्लाह प्रदान गर्नुहुने सम्पुण राजनैतिक पार्टीहरु , र यसको नेतृत्व गण , यस क्षेत्रका सम्पुण संघ संस्थाका प्रतिनिधि , नगरप्रमुख , वडाध्यक्ष र सदस्यहरु , प्रदेशसभा सदस्य माननीय हिराकुमार थापा ज्यु , सांसद एलपि साँबा लिम्बु , आदरणीय राजनैतिक तथा सामाजिक ब्याक्तित्व , देउमान थेबे दाजु , जिल्ला वनका प्रमुख बोधराज सुबेदी , सेक्टर वनका प्रमुख ओम भट्टराई , इलाका वनका प्रमुख शिवराम शाह ज्यु , सामुदायिक वन महासंघ नगरका अध्यक्ष दधिराम पोखरेल , मेरा कार्यसमितिका उपाध्यक्ष सचिव लगायात सम्पुर्ण कार्यसमितिका साथीहरु , सल्लाहकार तथा संस्थापक अध्यक्ष , लगायात सम्पुण तथा पत्रकार नागरिक समाज सबैमा धन्यावाद भन्न चाहन्छु र यस्तै साथ सहयोगको कामना पनि गर्दछु । युवाहरुले पनि केहि गर्न सक्छन भनेर आट र विश्वास दिनुभएको छ यसप्रकारको हौसला निरन्तर पाइरहु भन्नचाहन्छु ।
शब्द तस्बीर ः लीलाराज झापाली /कनकाई
Previous बन्द निषेधित र पर्यटकिय नगरिको पहिचान विश्वभर फैलाउन जेसिज सम्मेलन
Next मानव कल्याणमा कमल थापा
झापाको पुरानो सदरमुकाममा एनआइसी बैँक
अस्मिताका प्रशंसक र भिनाजुले गलत प्रचार गरे भिडियो इडिटिङ्ग गरियो
सुमितलाई सर्बाधिक भोट दिलाउन प्रचार तीब्र
निर्मलाका दोषीलाई कार्वाहीको माग गर्दै कनकाईमा प्रदर्शन
कनकाई अनलाईन कनकाई नगरपालिका अन्तर्गत सुरुङ्गामा निर्मला हत्याको विरोधमा मंगलबार प्रदर्शन गरिएको छ । कन्चनपुर …
कनकाई सामुदायिक वनको आगो नियन्त्रणमा
जहाज दुर्घटनामा परि सुरुङ्गाकी शिलाको मृत्यु
March 13, 2018	13,363
विर्तामोडमा पनि यस्ता इमान्दार रिक्सा चालक जसले यात्रुको सुन र नगद फिर्ता गरे
September 17, 2017	13,116
झापामा कांग्रेस कार्यकर्ताबाट भोट खरिद प्रयास
June 22, 2017	12,057
सुमित अब मेरो छोरो रहेन धुब्र पाठक
October 6, 2018	11,918
सुरुङ्गामा दिउसै चोरी गाउँलेले फेला पारे भकारीभित्रै चोर
June 8, 2017	11,704
dinesh gautam: Swasta pratisparda hunu paryo...
Dinesh KC: Kasle Jitchha Pani Lekhnu hola hai kanakai online sir...
kb: taja news update garnu parne bhayo sir...
Dinesh Poudell: Best wishes to Team Kanakai Online ! :)...
Featured स्थानीय चुनाव एमाले झलनाथ खनाल प्रहरी तेह्रथुम विद्या भण्डारी राष्ट्रपति स्थानीय निकायको चुनाव झापा निर्वाचन
रकम वाढ्दा वाढ्दै झापा गाउँपालिकामा काग्रेस कार्यकर्ता रङ्गेहात पक्राउँ
स्वर्गीय मदन ढकाललाई ‘लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड’
कनकाई अनलाइन डटकम
कनकाई नगरपालिका, झापा
बिज्ञापनको लागि : ९८१६०६४०४४
Designed by CoderPradip from TechnoWeb
© Kanakai Online 2018, All Rights Reserved